တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA အား ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံ သည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးနှင့်အတူ သံရုံးမှတာဝန် ရှိသူတို့တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောဒေသတွင် ဖြစ်ပွား ခဲ့သည့်ပြဿနာများအား အစိုးရနှင့်တပ်မတော်၏ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှုများအပေါ် နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာတွင် ဂျပန်နိုင်ငံမှ ရပ်တည်ဆောင်ရွက်ပေးနေမှုအခြေအနေများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဘင်္ဂါလီအရေး ကိစ္စနှင့်ပတ် သက်ပြီး လွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်အခြေအနေများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်အတွက် တပ်မတော်မှဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဂပြနျနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA အား ယနေ့ နံနကျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံတှဆေုံ့ သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး စိုးထှဋျနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဂပြနျနိုငျငံသံအမတျကွီးနှငျ့အတူ သံရုံးမှတာဝနျ ရှိသူတို့တကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ ရခိုငျပွညျနယျ၊ ဘူးသီးတောငျ၊ မောငျတောဒသေတှငျ ဖွဈပှား ခဲ့သညျ့ပွဿနာမြားအား အစိုးရနှငျ့တပျမတျော၏ ဖွရှေငျးဆောငျရှကျမှုမြားအပျေါ နိုငျငံတကာမကျြနှာစာတှငျ ဂပြနျနိုငျငံမှ ရပျတညျဆောငျရှကျပေးနမှေုအခွအေနမြေား၊ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျးဖွဈပှားခဲ့သညျ့ ဘင်ျဂါလီအရေး ကိစ်စနှငျ့ပတျ သကျပွီး လှတျလပျသော စုံစမျးစဈဆေးရေးအဖှဲ့ ဖှဲ့စညျးဆောငျရှကျလကျြရှိသညျ့အခွအေနမြေားနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံ၏ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေးရရှိရနျအတှကျ တပျမတျောမှဆောငျရှကျနမှေုအခွအေနမြေားအား ရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာ အမွငျခငျြးဖလှယျဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
မေ ၃၊ ၂၀၁၈ Admin 0